Wasiirka Arrimaha Dibadda Yusuf Garaad Oo ka Hadlay Maxaabbiista Soomaaliyeed ee Dibadda ku xiran
Wednesday May 31, 2017 - 10:04:51 in Wararka by Super Admin
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yusuf Garaad Cumar oo aan la hadlin saxaafadda, mar walbana bartiisa soo dhigo wararka muhiimka ah ee waxqabadka wasaaradda ayaa waxaa uu soo daabacay warbixin ku saabsan Maxaabbiista Soomaaliyeed ee Dibadda.
Hadaba, Halkan Ka Akhriso, Qoraalka Wasiirka EeMaxaabbiista Soomaaliyeed ee Dibadda:
Waxaa maalmahaan socda olole lagu dalbayo in ay Dowladdu u istaagto dhallinyaro Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalal shisheeye,taas oo loo arko, ahna waajib Dowladda saaran.
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda ee Seychelles arrinta ugu weyn ee uu ila soo qaaday waxay ahayd nabadgelyada badda noo dhexeysa iyo wadashaqeynteenna mustaqbalka.Ka dib markii aan uga warramay isbeddelka dalka ka dhacay,
Aniguna arrinta ugu weyn ee aan ku soo qaaday waxay ahayd Maxaabbiis Soomaali ah oo ku xiran Seychelles.
India, Safaaradda Soomaaliyeed ee New Delhi iyo Xeer Ilaalinta Qaranku waxay qabteen Qareen u dooda mid kasta oo ka mid ah Maxaabbiista Soomaaliyeed ee ku jira xabsi ku yaalla Mumbai.Safaaradda Soomaaliya waxaa kale oo ay u asteysay mid ka mid ah Diblomaasiyiinteedu in uu tago Mumbai oo 1400 km u jirta New Delhi mar kasta oo Maxkamad la soo taagayo mid ka mid ah boqol iyo dheeraadka Maxaabbiista Soomaaliyeed ah.
Maanta (Talaada) oo u dambeysay waxaan mowduucan fadhi ka yeelannay Wasiirka Garsoorka iyo Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda taasoo ahayd markii labaad isla toddobaadkan, ka horna waxaan wadajir ula kulmay Agaasimaha Aasiya iyo Agaasimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda.Waxaa arrinta Maxaabbiista ku xiran India isla maanta ka wadahadlay Agaasimaha Aasiya iyo Danjiraha Soomaaliya ee New Delhi.
Laba ka mid ah Dowladaha Saddexda ah ee aan xusay Ethiopia, Seychelles iyo India waxaan isla meel dhignay in maxaabbiista Soomaaliyeed ee dalalkooda ku xiran lagu soo wareejiyo gacanta Dowladda Soomaaliya.Dalka kale waxaa noo billowday xiriir aan ku rajo weyn nahay in aan ka miro dhalin doonno mar dhow.
Shalay oo u dambeysay waxaan farriin ka helay saddexda Dowladood middood, farriintaas oo ah mid yididdiilo hor leh I gelisay.Howshani hadba heerka ay mareyso ee in la sheego aanay wax u dhimi karin furdaaminta iyo marka ay geba-gebo tahay waan la wadaagi doonnaa dadweynaha Soomaaliyeed.
Waa go’aanka Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxda kale ee dalku ay isla qaateen in ay muhiimad weyn ahaato sidii dhallinyarada Soomaaliyeed ee xabsiyada dalka dibaddiisa ku jira dib loogu soo celin lahaa gacanta Dowladdooda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda,: Yusuf Garaad Cumar